Taariihkhda Doorashooyinkii Somaalilaan u qabsoomay 29 Sanadood ee la soo dhaafay iyo Saadaasha Doorashooyinka Soo socda qalinkii A/rahman fidhinle UK | Berberatoday.com
Taariihkhda Doorashooyinkii Somaalilaan u qabsoomay 29 Sanadood ee la soo dhaafay iyo Saadaasha Doorashooyinka Soo socda qalinkii A/rahman fidhinle UK
Doorashooyinkii Somalilaan u qabsoomay 29 -kii Sanadood ee la soo dhaafay waa taariikh xusuusteeda leh oo diiwaanka gashay.
1- Doorashadii shir-beeleedka ee Boorama ka dhacday sanadkii 1993 waxaa is soo sharaxay Mahamed haji ibrahim Cigaal, Abdirahman Aw Ali tuur ( AHN), Omar Carte Qaalib iyo Ahmed Mohamed Halac. Waxaana madaxweyne loo doortay oo ku guuleystay marxuun Mohamed haji Ibrahim Cigaal ” AHN”. Madaxweyne Cigaal wuxuu Somalilaan kala dabaashay waqti aad u adag oo ahaa waqtigii ugu adkaa ee abid Somalilaan soo mara xag colaadeed iyo xag dhaqaale xumo labadaba.
9- Waxaa maanta fadeexad qaawan ku ah Dimuqraadiyadii curdinka aheyd ee Somaalilaan ku taameysay mudada dheer iyada oo sadexdii Gole doorasho uu waqtigoodii iyo maandheytkoodiiba uu dhamaaday oo ay mudo kordhin kuraasta ku fadhiyaan: Golaha Baarlamaanka Somalilaan waxaa la doortay 28/9/2005 si ay 5 sanadood oo keliya kuraasta ugu fadhiyaan waxaana ay mudo dhaafeen 11 sanadood .Golaha Guurtida Soomalilaan waxaa la doortay 1997 si ay kuraasta ugu fadhiyaan 6 sandood oo keliya waxaana ay mudo dhaafeen 23 sanadood oo dhaxaltooyo ayey kuraastoodu iyaga noqotay. Golaha Degaanka Somalilaan waxaa la doortay Nofember 2012 si ay kuraasta ugu fadhiyaan 5 sanadood oo keliya waxaana ay mudo dhaafeen 3 sandood, ku waas oo maanta kuraasta ugu fadhiya sife qayrul sharci ah.
Hadaba Su’aasha qarnigu waxay tahay Doorasho ma ku dhacaysaa sanadka soo socday bishiisha May 2021, Boowe Jawaabtu idinka lee waaye !! Dimuqraadiyadu maaha Doorasho kuraasta laysku bedelo markii la doono ee Dimuqraadiyadu waa ka qaybgalka guud, metelaada guud, go’aan qaadasho isku dheeli tiran iyo in danaha guud ee ummadda la wadareeyo oo laga hor mariyo danaha gaarka ah. Xalka Somaalilaan maanta waa in la helaa Nimaad iyo System shaqeeya oo ummadda kala haga. Xukuumadana waxaa looga fadhiyaa in ay iswaafajiso Caqiidadeeda Siyaasadeed iyo dhaqanka Dimuqraadiyada Doorashooyinka Somalilaan, si doorashadu waqtigeeda ugu qabsoonto Waa in xukuumadu xalisaa xurgufta siyaasadeed ee ka taagan Saami qeybsiga kuraasta Golaha Wakiilada iyo Kootooyinka Haweenka iyo beelaha laga tirade badan yahay.